Wakiilka Mohamed Salah Oo England U Duulay & Mushaharka Aanad Rumaysan Karin Ee Heshiiskiisa Cusub Lagu Siinayo - GOOL24.NET
Wakiilka Mohamed Salah Oo England U Duulay & Mushaharka Aanad Rumaysan Karin Ee Heshiiskiisa Cusub Lagu Siinayo
Wakiilka hoggaamiyaha kooxda Liverpool ee Mohamed Salah oo lagu magacaabo Ramy Abbas Issa ayaa lagu soo warramayaa inuu Sabtidii shalay u duulay dalka England isaga oo daawaday kulankii dhex maray kooxdaas iyo Watford.
Reds ayaa markale diray farriinta ah inay ka go’antahay inay u tartamaan horyaalka iyaga oo 5-0 kusoo jiidhay Hornets kulankii ugu horreeyay ee uu kooxdaas layliyay tababare Claudio Ranieri oo ay dhawaan magacaabeen.
Mohamed ayaa markale kulankaas kasoo sameeyay bandhig heer sarre ah isaga oo soo dhaliyay goolkiisii 10-aad ee xilli ciyaareedka sidoo kalena caawiye ka ahaa goolkii furitaanka ee Sadio Mane.
Kaddib bandhigiisaa heerka sarre ah, waxa la aaminsan yahay in wakiilkiisa Colombian-ka ahi uu sii wadi doono inuu Reds kala hadlo heshiis kordhin 29 sano jirkaas mushahar 500,000 oo pound ah toddobaadkii lagu siinayo.
Sida uu sheegay wargeyska Mirror, wakiilka Salah iyo maamulka Liverpool ayaa horeba u bilaabay wadahadalada hordhaca ah ee heshiis kordhinta. Salah ayaa hadda 200,000 oo pound qaata waxaana uu qandaraaskiisu ku eeg yahay 30-ka June ee sanadka 2023.
Si kastaba, waxay u muuqataa in Mohamed loo samayn doono mushahar kordhin weyn gaar ahaan kaddib markii uu shalay tababare Jurgen Klopp ku sifeeyay mid haatan ka wanaagsan Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Goolka Salah ee shalay cajiibka ahaa ayaa ahaa mid uu baas ka helay Roberto Firmino isaga oo dhaafay Juan Hernandez, Juraj Kucka iyo Craig Cathcart si uu shabaqa Ben Foster usoo taabto.